Zandarimariam-pirenena : Zandarimariam-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaZandarimariam-pirenena : Zandarimariam-pirenena
Mitohy ary mihamafy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana frantsay sy ny fanjakana malagasy. Porofon’izany ny fisiana sy fandefasana zandary mandeha manaraka fiofanana any amin’ny “Ecole de guerre” any Frantsa isan-taona, izay raisin’ity firenena ity an-tanana ny lany rehetra. Amin’io taona 2018 io, dia “officier” iray eo anivon’ny zandarimariam-pirenena izay voasafidy ao anatin’ny fifantenana hatao no hisitraka izany mandritra ny herintaona. Tsy ambakan’izay ihany koa ny fisiana teratany vahiny efa tena za-draharaha tonga eto amintsika hampiofana, ary hanampy ny fahaiza-manao ireo zandary, amin’ny ady atao amin’ny tsy fandriam-pahalemana . Ankoatra ireo voalaza, dia isan’ny manamarika ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta ihany koa ny fampitaovana matetika avy amin’ny zandarimaria frantsay sy ny nosy rahavavy La Reunion, ho an’ny zandarimariam-pirenena malagasy. Omaly, dia nanolotra fitaovana maro toa ny solosaina, fitaovana fandraisam-peo, akanjo maro natokana ho an’ny zandary , sy izay tsy voatanisa ireo firenena vahiny ireo, izay nosoloin’ny Masoivoho frantsay tena, Véronique Vouland-Aneini, miasa sy monina eto Madagasikara .
Teny amin’ny toby Ratsimandrava Andrefan’Ambohijanahary no nanatanterahana ny lanonana sy nandraisan’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard niaraka tamin’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ity vondron-kery ity, io Ambasadaoro io. ”Mino aho fa hitondra fanatsarana amin’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy amin’ny fiarovana ny vahoaka malagasy izao fampitaovana izao”, hoy ity Masoivoho vahiny ity nandritra ny lahateny izay nataony. Mbola nanambara ihany koa ity farany, fa mankasitraka ary manohana hatramin’ny farany ny ezaka maro vitan’ny Jeneraly Randriamahavalisoa Girard tamin’ireo baiko sy toromarika napetrany, mba hitandroana ny filaminana eto amintsika. Raha averina kely ny ara-tantara, dia ny frantsay no nampisy ny zandarimariam-pirenena. Noho izany, dia ireo tany nozanahan’ity firenena matanjaka ity irery ihany no misy ity vondron-kery iray ity. Izay ihany koa, raha ny fanazavan’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria no mahatonga azy ireo manome fitaovana matetika sy isan-taona ity vondron-kery ity. “Zava-dehibe izao fanomezana izao, ka hampiasaina sy kojakojaina ara-drariny sy amin’ny ara-dalàna”, hoy ity tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ity. Tsy vao sambany ny fisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta, fa efa naharitra an-taonany maro izany. Mbola hitohy hatrany ihany koa izao fampitaovana izao, ary hihamafy hatrany ny fifandraisan’i Madagasikara sy Frantsa.